आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन ३० गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट १४ तारिख – SUDUR MEDIA
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन ३० गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट १४ तारिख
August 13, 2021 AdminLeaveaComment on आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन ३० गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट १४ तारिख
आज मिति २०७८ साल साउन ३० गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट १४ तारिख नेपाल संवत् ११४१ ! आज शनिबारको दिन तपाईंको दिन कसरी बित्नेछ त हेर्नुहोस् राशिफल !
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) भौतिक सम्पति तथा विलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको ध्यान आफुतिर केन्द्रित गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो सफलता हात लाग्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापारमा व्यावसायमा प्रतिष्पर्धा आम्दानि बढाउँन सकिनेछ । नोकरिमा सहकर्मीहरुलाई किनारा लगाउँदै अग्र स्थानमा तपाईको नाम आउँनेछ भने पदोन्नतिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) शैक्षिक परामर्श तथा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई शिक्षाको पहुचमा जोड्न सकिने छ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) आम्दानिका स्रोतहरु एक्कासि बन्द हुँदा महत्वपुर्ण कामहरु थाति रहन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । समाजसेवामा समय दिएपनि जनतासँग भिज्न नसक्दा प्राप्त हुने मान सम्मान टरेर जानेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) माया प्रेममा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने पति पत्निबिच बिश्वासको डोरो अझ कसिलो भएर जानेछ । छोटो दुरिको व्यावसायिक तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) शुभचिन्तक तथा आफन्तको सहयोग पाईने हुँदा दैनिक कामहरु गर्न सहज हुँनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने धन आर्जन गर्ने बिभिन्न स्रोतहरुको पहिचान गरि लगानि गर्न सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) आफन्तजन तथा परिवारका सदस्यहरुको भेटघाटले दिन रमाईलोका साथ बिताउन सकिनेछ । खेलकुद तथा अन्य गतिबिधिहरु सौहार्दपुर्ण बाताबरणमा सम्पन्न हुनेछन् भने पढाईमा समय दिन सकिनेछैन ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ख्याल नगरे स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । पढाई लेखाई अरुदिन भन्दा खस्केर जानेछ । माया प्रेममा अबिश्वास सिर्जना भई छुट्टिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) शिक्षा तथा बौद्धिकताको प्रयोग गरि क्षमता बढाउन सकिने तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि फस्टाएर जानेछ । पैत्रिक धन हात लागि हुने योग रहेकोछ भने पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) व्यापारमा रुपैया पैसा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । आज थालिएका जुनसुकै कामहरुबाट भनेजस्तो कमाई हुँने हुँदा आर्थिक क्षेत्र मजभुत हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) पदिय दायित्व बढ्नेछ भने निर्णय क्षमताको बिकाश हुनेछ । उच्च पदस्थ ब्याक्तित्वसँग भेटघाट हुँने तथा मानसम्मान,ईज्जत,प्रतिष्ठा बडेर जानेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) समयको ख्याल नगरि काम गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । पुराना समस्या बल्झने तथा नयाँ समस्याहरु आउँने हुँदा काम गर्न असजिलो हुनेछ । तपार्ईँको दिन शुभ रहोस् ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल साउन २८ गते, चर्तुथी तिथि बिहीबार तदनानुसार १२ अगष्ट सन् २०२१ तारिख
अमेरिकाबाट आएर बिहे गर्दा सु हाग रा तको दिन बुहारीमा जब छोराले यस्तो खोट देखे त्यसपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
शिक्षकले छात्रालाई परिक्षा कोठामै यस्तोसम्म गरे, युवतीले सहन नसकेर घर छाडिन, आमा रुदै मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)